Statistika 9 momba ny fiantraikan'ny traikefan'ny mpampiasa finday | Martech Zone
Efa nitady ny tranokalanao tao amin'ny Google ve ianao ary nahita ny Mobile-Friendly tag eo aminy? Google aza manana pejy fanandramana finday izay ahafahanao mijery olana amin'ny tranokalanao. Fitsapana tsara dia tsara io izay mamakafaka ireo singa ary manome antoka fa tsara toerana sy hita maso izy ireo. Mobile-friendly dia tsy finday novaina, na izany aza. Fitsipika fotsiny io ary tsy mijery ny fihetsiky ny mpampiasa finday tena izy eo amin'ny tranonkalanao.
Ny tompona orinasa maoderina rehetra tsy ho ela dia tsy manan-tsafidy — tsy maintsy manana fampiasa finday matanjaka ianao, tsy ho fanampiana ny mpanjifanao finday fotsiny, fa mba hahitan'izy ireo azy voalohany! Rahul Alim, CustomCreatives.com
A tranokala mandray andraikitra izay nohamarinina ho an'ny mpampiasa finday dia manana tombony tena lehibe. Voalohany, ilay mpampiasa mitsidika amin'ny alàlan'ny birao sy finday dia hanana traikefa mitovy amin'izany, ahafahan'izy ireo mivezivezy sy mahita ny vaovao ilain'izy ireo mora foana. Faharoa, hifanaraka amin'ny fomba kanto ny marika. Fahatelo, afaka mamaky haingana ny tranokala… fa tsy mamily lalana, mifamoaka mavesatra ny CSS.
Maninona no mandany fotoana amin'ny fanatsarana finday? Ireto misy antontan'isa 9 manaporofo ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny fanatsarana ny traikefa findainao:
33% amin'ny varotra mety hitranga rehetra no tsy mahomby rehefa tsy manatsara ny finday ny tranokalan'ny orinasa
40% ny olona no hikaroka tranokala hafa raha tsy voatsara amin'ny finday ny valiny voalohany
45% ny olona 18-20 taona no mampiasa ny finday avo lenta hitadiavana amin'ny Internet isan'andro
80% amin'ireo mpanjifa no mahavita atleast ny sasany amin'ireo fiantsenany amin'ny alàlan'ny finday avo lenta isam-bolana
67% amin'ireo tompona finday rehetra no mampiasa ny finday avo lenta hizaha ny tranonkala
Ny 25% amin'ireo mpampiasa internet any Etazonia dia tsy miditra afa-tsy amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fitaovana finday
61% amin'ireo mpanjifa no manana ny heviny tsara kokoa momba ireo orinasa manana traikefa amin'ny finday tsara
57% ny olona tsy hanome soso-kevitra orinasa raha manana tranokala finday tsy dia ampy loatra
Ny 70% amin'ny fikarohana azo tsapain-tanana amin'ny Internet dia mitarika ho amin'ny hetsika ataon'ny mpanjifa ao anatin'ny adiny iray
Tags: endrika ho an'ny findayfamolavolana findayfanatsarana findaymamaly ny findaystatistikan'ny findaystatistikan'ny fampiasana findaytraikefa amin'ny mpampiasa findayfinday uxmanaiky Design
Mikatona foana: statistika 10 mitondra fiovana amin'ny fivarotana
Singa 8 amin'ny endrika famolavolana Booth mahomby
6 Jiona 2016 à 9:04
Toa nanomboka tamin'ny taona 2013-2014 ny ankamaroan'ireo angon-drakitra ireo (tena efa lany tamin'ny tontolon'ny teknolojia haingana sy miovaova foana). Misy antontan'isa vao haingana ve?
Jul 2, 2016 amin'ny 2: 22 AM
Hey Douglas, ny fisian'ny finday dia tsy maintsy ho an'ny orinasa rehetra, hoy tokoa. Tsy vitan'ny hoe mampitombo ny tsena kendrena sy manamora azy ireo fa mety ho tsara indrindra ihany koa ny fahazoana mpampiasa vaovao ho hitan'izy ireo amin'ny voalohany. Satria ny orinasa rehetra dia tsy maintsy mifantoka amin'ny mpanjifa mba hahombiazana, ny tranokalan'ny finday dia tsy maintsy eran'izao tontolo izao ho lasa nomerika isan'andro. Misaotra betsaka!